Madaxweynaha Jubbaland oo Muqdisho Kula Kulmay Madaxweynihii Hore iyo Madaxweyne Farmaajo (SAWIRRO) - Hablaha Media Network
HMN:- Madaxweynaha maamulka Jubbaland mudane, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo shalay galinkii hore soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa xalay hooygiisa ku booqday Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo gaarsiiyay Salaan iyo bogaadin uu uga siday shacabka reer Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa Madaxweynahii hore ee Soomaaliya uga mahad celiyay sida uu ugu dhiiraday isbadalkii dalka ka dhacay iyo in Dowladnimada Soomaaliya ay sii socoto.
Axmed Madoobe ayaa Xasan Sheekh Maxamuud uga mahad celiyay intii uu talada dalka hayay wada shaqeyntii soo dhexmartay iyo sida kaalin muuqata uu uga soo qaatay Madaxweynihii hore dhismaha maamulka Jubbaland.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weli ku sugan Magaalada Muqdisho, iyadoo maalinta beri la filaayo inuu ka qaybgalo xaflada caleemo saarka Madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in taariiqda ay xusi doonto Madaxweynihii hore ee dalka, maadaama si aanan horay looga baran Madaxweynayaashii dalka soo maray uu tanaasul u sameeyay wareegi labaad ee doorashada.
Dhinaca kale Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa xalay ku booqday Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane, Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Labada Madaxweyne oo kulan gaar ah yeeshay ayaa ka wada hadlay xaalada uu dalku marayo gaar haan isbadalka ku yimid Siyaasada dalka iyo qaabkii Dowlada Federaalka iyo Dowladaha xubnaha ka ah ay u wada shaqayn lahayeen.
Madaxweynaha Jubaland ayaa ka maqnaa kulanlii u horeeyay ee madaxweyne Famaajo uu la qaatay Madaxda maamul Goboleedyada, kaas oo looga hadlay sidii wada shaqayn fiican ay u yeelan lahaayeen dowlad goboleedyada iyo Dowladda Federaalka ee Soomaaliya.